Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Mid ka mid ah shantii qof ee British ah ayaa diiday talada ka dhanka ah socdaalka shisheeye
Dad ka badan oo ka yimid London ayaa fasaxa dibadda u baxay 12-kii bilood ee la soo dhaafay marka loo eego gobollada kale ee UK, iyadoo 41% ay sheegeen inay galeen fasax dibadda ah oo toddoba maalmood ah ama ka badan kaliya 36% oo keliya ayaa sheegay inaysan wax fasax ah helin.
Mid ka mid ah shantii qofba wuxuu iska fogeeyay welwelka Covid- wuxuuna diiday digniinaha soo noqnoqda ee siyaasiyiinta iyo khubarada inay guriga joogaan - si ay u qaataan fasax dibadeed sannadkii la soo dhaafay, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris ay maanta (Isniin 1 November) soo saartay WTM London.
Natiijooyinka ka soo baxay Warbixinta Warshadaha WTM, oo ra'yi dhiibtay 1,000 macaamiisha UK, ayaa daaha ka qaaday 21% dadka Ingriiska inay qaateen fasax todoba maalmood ah ama ka badan 12 bilood ilaa Agoosto 2021, iyadoo 4% ka mid ah ay leeyihiin labadaba safar dibadeed IYO joogitaan.
29% kale ayaa qaatay joogis kaliya, halka 51% aysan gabi ahaanba tagin fasax sanadkii la soo dhaafay, ayaa daaha ka qaaday warbixinta laga sii daayay WTM London.
Kuwii u soo dhoofay dibedda todoba maalmood oo nasasho ah ama ka badan ayaa sidaas yeeley in kasta oo ay soo noqnoqdeen codsiyo ka yimid wasiirrada dawladda iyo la-taliyayaasha caafimaadka inaysan safrin, iyadoo laga cabsi qabo in Covid uu sii faafo.
Waqtiyo kala duwan 18-kii bilood ee la soo dhaafay, safarka gudaha iyo ka imanaya UK waa la hakiyay sababta oo ah Covid, oo ay ku jirto inta badan seddexda bilood ee ugu horreeya 2021, marka socdaalka dibadda uu ahaa sharci-darro.
Xataa marka dibada loo safrayo ahaa la oggolaaday, wasiirrada dawladda iyo khubarada caafimaadku waxay si isdaba joog ah ugu booriyeen dadka inay iska dhaafaan fasaxooda sannadlaha ah ee dibedda si ay gacan uga geystaan ​​xakameynta Covid.
Bishii Juun 2020, wasiirkii hore ee caafimaadka Helen Whately ayaa u sheegtay Brits inay "si taxadar leh u eegaan" ka hor intaysan qabsan fasaxyada dibadda; Bishii Janaayo 2021, Xoghayihii hore ee Caafimaadka Matt Hancock wuxuu dadka kula taliyay inay qorsheeyaan "xagaaga weyn ee Ingiriiska" iyo xoghayihii arrimaha dibedda Dominic Raab wuxuu sheegay inay "aad u horeeysay" in Brits ay ballansadaan fasaxyada xagaaga ee dibedda. Xoghayihii hore ee deegaanka George Eustice wuxuu si isdaba joog ah u sheegay inuusan "wax niyad ah u haynin inuu u safro ama aado fasax dibadda ah", halka Raiisel wasaare Boris Johnson uu sheegay bishii May in fasax-bixiyeyaasha Ingiriiska aysan aadin wadamada liiska ku jira marka laga reebo "xaalad aad u daran".
Dhibaatada iyo qiimaha tijaabooyinka Covid, iyo sidoo kale jahawareerka nidaamka iftiinka taraafikada - ugu yaraan khatarta isbeddelka daqiiqadaha ugu dambeeya ee arkay fasax-qaasimayaasha ku qulqulaya guriga Boqortooyada Midowday si ay uga fogaadaan karantiil - si cad kama aysan dhigin kuwa u xiisaynaya fasaxa dibedda .
Kuwa ugu yar ee ay u badan tahay inay fasaxa dibadda ah qaateen waxay ka yimaadeen Waqooyi Bari, iyadoo 63% dadka gobolkan ay sheegeen inaysan wax fasax ah helin haba yaraatee, kaliya 13% waxay sheegeen inay galeen fasax dibadeed halka 25% ay yiraahdeen d degeen.
Agaasimaha Bandhigga WTM ee London Simon Press ayaa yidhi: "Natiijadu waxay u hadlaysaa naftooda - fasaxa xagaaga ee soo jireenka ah ee dibadda waxay u arkaan in badan oo Britian ah inay tahay lama huraan, maaha wax raaxo ah, qaar yarna waxay diyaar u ahaayeen inay ka tanaasulaan todobada ama 14ka maalmood ee ay qorraxda ku jiraan 12 bilood ee la soo dhaafay sababtoo ah welwelka laga qabo Covid.
"Taasi waa in kasta oo ay tahay in la qaado tijaabooyinka qaaliga ah ee 'Covid', khatarta isbeddelka iftiinka taraafigga iyo ka hor imaadka talada badan ee hoggaamiyeyaasha si ay guriga u joogaan."